How to live with Hepatitis B (ဘီ) ပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေခြင်း ~ Myanmar Forward
How to live with Hepatitis B (ဘီ) ပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေခြင်း
Posted by drmyochit Saturday, June 07, 2014, under ကျန်းမာရေး | No comments
1. B ပိုးက ရေတဖန်ခွက်ထဲသောက်ခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်ပါသလား။
2. ကျွန်မမှာ ဘီပိုး ရှိတယ်ဆရာ။ ပိုက်ဆံကလည်းမတတ်နိုင်တော့ ဆရာဝန်စစ်ခိုင်းသမျှလည်း မစစ်နိုင်ဘူးဆရာ။ ဘယ်လို နေထိုင် စားသောက်ကုသရမယ်ဆိုတာ ပြောပေးပါလားဆရာ။ ကုသလို့လည်း ပျောက်ပါသလားဆရာ။ ကျွန်မက စာသင်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ပါဆရာ။ ကလေးတွေကော ကူးစက်နိုင်ပါသလား။
• (ဘီ) ပိုး ဘယ်လိုကူးသလဲ။
၁။ ပိုးပါနေတဲ့ အပ်အမျိုးမျိုး ဆေးထိုးအပ်၊ တက်တူးထိုးအပ်၊ အပ်စိုက်ကုအပ်၊ အလှအပကွင်းတပ်တဲ့အပ်၊ နားဖေါက်တဲ့အပ်၊ မူးယစ်ဆေးထိုးတဲ့အပ်၊
၂။ လိင်။ ပိုးရှိသူ ယောက်ကျား-မိန်မကနေ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အကာအကွယ် မသုံးရင်။
၃။ မိခင်ကနေ ကလေး။ ခွဲမွေးမွေး၊ ရိုးရိုးမွေမွေး မထူးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သွေးစစ်ရင် hepatitis B surface antigen (HBsAg) အနုတ်ပြနေရမယ်။ HBsAg test positive ဖြစ်နေရင် သူကနေမွေးလာတဲ့ကလေးကို ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုးလုံး ၁၂ နာရီအတွင်း ထိုးပါ။ ကာကွယ်ဆေးရိုးရိုးကို မွေးမွေးချင်း + ၁ လ + ၆ လမှာ စုစုပေါင်း (၃) ခါထိုးပါ။ ကလေးကို အသက် ၉-၁၈ လရှိရင် antibody test အပေါင်းပြနေမယ်။ တကယ်လို့ အနုတ်သာပြနေသေးရင် စတုတ္ထအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။
၄။ လက်ပွန်းတတည်းနေခြင်း။ သွေး ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရည်နဲ့ ထိတွေ့မိသူတွေကိုလဲ ကူးနိုင်တယ်။ အနာအဆာနဲ့ မျက်လုံးထဲဝင်ရာကနေသာကူးမယ်။ သွးတိုက်တံ၊ အမွှေးရိတ်ဓါး၊ လက်သည်းညှပ်တွေ မျှသုံးရင်လဲကူးနိုင်တယ်။
• (ဘီ) ပိုးရှိနောက ပြန်ပျောက်မှာလား။
လူကြီးဆိုရင် ပျောက်နိုင်တယ်။ ၉ဝ% ပျောက်မယ်။ ၁ဝ% က နာတာရှည်အသဲရောင်ဖြစ်မယ်။ ကလေးတွေမှာ ဆိုးတယ်။ ၄ဝ% ပျောက်မယ်။ ၆ဝ% နာတာရှည်အသဲရောင်ဖြစ်မယ်။ အသက် ၁ နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးတွေ ၁ဝ% သာ ပျောက်မယ်။ ၉ဝ% နာတာရှည်အသဲရောင်ဖြစ်မယ်။
• ရက်တိုနဲ့ နာတာရှည်ဆိုတာဘာလဲ။
(ဘီ) ပိုးနဲ့ထိတွေ့မိပြီးနောက် ၆ လအတွင်းမှာဖြစ်တာက ရက်တို။ ဒိနောက်ပြန်ပြီး သက်သာလာမယ်။ ၆ လနောက်မှာ သွေးစစ်လို့ (HBsAg+) ဖြစ်နေရင် နာတာရှည်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ ပြန်မပျောက်တော့ပါ။
• (ဘီ) ပိုးက သူများကိုမကူးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊
အတူနေသူတွေတွေအားလုံး (ဇနီး၊ ခင်ပွန်းအပါအဝင်) Hepatitis B vaccine ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ (၃) ခါထိုးရမယ်။ တသက်စာ ကာကွယ်ပေးမယ်။ ဒါ့အပြင် စူးရှနိုင်တာတွေမှန်သမျှ မထိခိုက်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်တာနဲ့ ပတ်တီးစီးပြီး ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အဲလိုအရာတွေနဲ့ မျှဝေမသုံးပါနဲ့။ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုး၊ ရင်ချင်းအပ်တာနဲ့ မကူးပါ။ ပိုးရှိသူက ချက်ကျွေးတာ စားလို့လဲ မကူးပါ။
• နေမကောင်းတိုင်း (ဘီ) ပိုးရက်တိုဖြစ်ပါသလား။
အများအားဖြင့် (ဘီ) ပိုးဝင်တာကို မသိလိုက်ဘူး။ နေမကောင်းမဖြစ်ဘူး။ တချို့မှာ ခံစားရမှာတွေကတော့ ဖျားမယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ အဆစ်တွေ အသားတွေနာမယ်၊ အစားပျက်မယ်၊ တုပ်ကွေးနဲ့တူတယ်။ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်တာတွေကတော့ ပျို့အန်မယ်၊ အသားဝါဖြစ်မယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။
• ရက်တိုအဆင့်ပြီးသွားတာကို ဘယ်လိုသိမလဲ။
သွေးစစ်ရင် (HBsAb+) တွေ့မယ် Antibodies ခုခံအား (အင်တီဘ်ေဒီ) တွေရှိနေပြီ။ နောက်ထပ် (ဘီ) ပိုး လာမကူးတော့သလို သူများကိုလဲ မကူးစေဘူး။
• နာတာရှည်ဖြစ်ပြီလို့ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
၆ လကျော်အထိ ပိုးတွေ့နေရင် နာတာရှည်။ ဆေးစစ်ရတော့မယ်။ အသဲကုဆရာဝန်နဲ့ ၆ လ၊ ဒါမှမဟုတ် ၁ နှစ်တခါ ပြနေရမယ်။ လူအများစုဟာ ကျန်းမာပြီး လူကောင်းလိုနေနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကနေကောင်းနေပေမဲ့ သူများကို ကူးစေမှာကို သိထားပြီး ရှောင်ကျဉ်စရာမှန်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ရမယ်။
• ဘယ်စမ်းသပ်နည်းတွေနဲ့ စောင့်ကြည်နေမှာလဲ။
Hepatitis B blood panel, Liver function tests (ALT), Hepatitis B e-Antigen (HBeAg), Hepatitis B e-Antibody (HBeAb), Ultrasound and imaging နဲ့ လိုအပ်သူတွေကို Liver biopsy တွေလုပ်မယ်။ လိုအပ်လာရင် ဆေးကုမယ်။
• နာတာရှည်ဖြစ်တာ ပျောက်သွားနိုင်သလား။
အခုထိတော့ ပျောက်ဆေး မရှိသေးပါ။ ဒါပေမဲ့ နာတာရှည်သမားတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို နှေးစေအောင် ဆေးတွေက လုပ်ပေးနိုင်ပြီ။ ပိုးတွေ နည်းလေလေ အသဲကိုထိခိုက်မှာ နည်းလေလေဖြစ်တယ်။ ကံကောင်းရင် ဗိုင်းရပ်တွေကို လုံးဝ ထိန်းနိုင်တယ်။ ရှားတော့ရှားတယ်။ သုတေသနတွေအရ အလားအလာကောင်းတွေရှိတယ်။
• ဘယ်ဆေးတွေကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားပါသလဲ။
- Interferon Alpha (Intron A) ထိုးဆေး။ ၁၉၉၁ ကတည်းကသုံးတယ်။ တပါတ်မှာ အကြိမ်များစွာ၊ ၆ လ၊ ၁ နှစ်ကြာထိုးတယ်။ ဒိထက်ပိုချင်လဲပိုမယ်။ flu-like symptoms, depression, and headaches တွေ ခံစားရနိုင်တယ်။
- Pegylated Interferon (Pegasys) ထိုးဆေး။ ၂ဝဝ၅ မှာ စသုံးတယ်။ တပါတ် ၁ ခါထိုးတယ်။ ၆ လ၊ ၁ နှစ် ကြာ ထိုးတယ်။ flu-like symptoms and depression တွေ ခံစားရနိုင်တယ်။
- Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix, or Heptodin) သောက်ဆေး။ ၁၉၉၈ ကစသုံးတယ်။ တနေ့ ၁ လုံး။ ၁ နှစ်ကြာ သောက်ရမယ်။
- Adefovir Dipivoxil (Hepsera) သောက်ဆေး။ ၂ဝဝ၂ ကစသုံးတယ်။ တနေ့ ၁ လုံး။ ၁ နှစ်ကြာသောက်ရမယ်။ Entecavir (Baraclude) သောက်ဆေး။ ၂ဝဝ၅ ကစသုံးတယ်။ တနေ့ ၁ လုံး။ ၁ နှစ်ကြာသောက်ရမယ်။
- Telbivudine (Tyzeka, Sebivo) သောက်ဆေး။ ၂ဝဝ၈ ကစသုံးတယ်။ တနေ့ ၁ လုံး။ ၁ နှစ်ကြာသောက်ရမယ်။
• (ဘီ) ပိုးတွေ့တိုင်း ဆေးသောက်ရမှာလား။ မဟုတ်ပါ။
• နာတာရှည်သမားတွေက ဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲ။ အရက်လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ ဆေးသောက်စရာမှန်သမျှ ဟာဗယ်ဆေးတွေအပါအဝင် ဆရာဝန်ကို ပြပြီးမှသာ သောက်ပါ။ အစားအသောက် လုံလောက်မျှတအောင်စားသောက်ပါ။ သွေးလှူလို့မရပါ။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလို့ (ဘီ) ပိုးစစ်ရမလား။ ကိုယ်ဆောင်မှန်သမျှ စစ်ပါ။ မွေးလာမဲ့ကလေးကို ကူးဘို့ အခွင့်အလမ်း ၉၅% ရှိတယ်။ ကလေးကို မွေးမွေးချင်း (၁) Hepatitis B vaccine ကာကွယ်ဆေး နဲ့ (၂) Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) ကာကွယ်ဆေးတမျိုးပါ ထိုးရမယ်။ ကလေးကို နို့တိုက်နိုင်ပါတယ်။ အကျိုးနဲ့ အပြစ်မှာ အကျိုးကပိုသာတယ်။
Dep-Provera သုံးလခံ ထိုးဆေး
Android တွင် Bump , iBeacon တို့နှင့် ဆင်တူသည့် နည...
ရွှေမန္တလာခရီးသည်တင်ယာဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား၊ လူအသေအပေ...
facebook v.10.0.0.28.27 for android(official)
တောင်ငူမြို့ အစာ အဆိပ်သင့်မှုတွင် ကလေးငယ်များ စားသေ...
အင်တာနက်အမြန်နှုန်း4Mpbs မှ6Mbps အထိ အသုံးပြုနိ...
စမတ်ဖုန်း၊ Laptop နှင့် Tabletမှ အလင်းရောင်ကြောင့်...
How to live with Hepatitis B (ဘီ) ပိုးရှိသူနဲ့ အတူ...
Pregnancy and Hepatitis B ကိုယ်ဝန် နှင့် ဘီပိုး
(၂၄)နာရီအတွင်း အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်(၂)စင်း သီးခြား...
ဆရာ/ဆရာမ မလုံလောက်မှုက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ချက်အနည်းဆုံးဖြစ်စေဟု ချင်း လူမှုရေးဝန်ကြီးပြော - ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ကထုန်ပြန်လိုက်သည့် ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်ချက်တွင် ချင်းပြည်နယ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အောင်ချက်အနည်းဆုံးဖြ...
ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်လာရန် အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း မရှိကြောင်း UNHCR ပြော - ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်။ နန်းဝေဖြိုးဇာ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR) အနေဖြင့် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် နေရပ်သို့ များ...